Anja Schaap na-efu ugbu a pụtara a PsyOp? Lee ihe mere (video) ebe a: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 3 June 2019	• 15 Comments
Ndi Anja Schaap ikpe ama ama ama dị ka a PsyOp (psychological ọrụ)? Na ihe m gara aga Enweela mrịrịrị egosi na ihe gbasara Anja Schaap nwere ike imeghari ngwa ngwa nke a na-akpọ 'Sherlock'. Ọfọn, gịnị ka anyị na-ahụ mgbe anyị na-ele ibe Facebook nke Anja Schaap? Mgbe ahụ, anyị na-ahụ na o nwere adreesị na-esonụ n'okpuru adreesị ya: 221B Baker Street. N'ịchọrọ na nke a abụghị egwuregwu ọchị, njikọ nke ngwa ngwa Sherlock ga-apụta ìhè ebe a.
Ònye biri na 221B Baker Street na London? Nri, Sherlock Holmes. Ya mere, ọ bụ ihe dị mma na profaịlụ Anja Schaap, gụnyere ya na netwọk mmekọrịta ya (ma ọ bụ n'akụkụ ya), ejiriwo ihe dị omimi jikọta ọnụ. A na-eji netwọk nke Inoffizieller Mitarbeiter mee ihe iji nyefee netwọk Facebook. N'ọnọdụ ọ bụla, o doro anya na ndị mmadụ na-egosipụta n'ụzọ doro anya njikọ ahụ na ngwa Sherlock. Were anya ma gụọ mgbe e mesịrị isiokwu a ọ dị mma ịmara otú e si eme ma mee ihe miri emi.
Afọ nke 33 afọ, bụkwa ihe na-egosi na anyị na Freemason PsyOp na-emekọrịta ihe. Nọmba 33 na-anọchite anya ogo kachasị elu n'ime ọha mmadụ nzuzo.
Ọnụ ọgụgụ nke nzaghachi na usoro oge Anja si Facebook yiri ka ọ dị ntakịrị na na mgbakwunye, nzaghachi ndị ahụ yiri ka ọ sitere na profaịlụ miri emi. Ihe omuma nke Anja onwe ya yiri ka omimi. Tụkwasị na nke a, usoro iheomume ya na-ezo aka na Alice na Wonderland, bụ nke na-ezo aka na oke nke ọdụdọ rabbit (egwu egwu). Ọ na - egosi na ọ na - egosi na ọ na - arụsi ọrụ ike maka 2 ruo ọtụtụ afọ, ọbụnakwa ka mmasị ya dị na usoro TV banyere Sherlock Holmes (chee banyere ngwa Sherlock).
Anyị na-ahụkwa akwụkwọ banyere John de Mol, nke m gosipụtara n'ọtụtụ isiokwu na nke a nwere ike ịbụ nnukwu nwoke n'azụ mmepụta ihe omimi ("Ònye bụ De Mol?"). Ndi a nile di ka "Ọ bụrụ na anyị gosipụtara ya n'ihu ọha ma wepụ ya, anyị maara na anyị nwere ike ịgwa ndị mmadụ ihe niile"?
Tags: 221B, Anja, ngwa, Baker Street, miri miri, deepfakes, Facebook, agba, Holmes, profaịlụ, psyop, Atụrụ, Sherlock, efu, efu
3 June 2019 na 22: 18
Ederede dị n'okpuru bụ si isiokwu a (gụọ dum site na ịpị njikọ):
Amaghị m ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe nkiri ahụ The Truman Show hụla ya ma n'eziokwu m nwere ike ikwu na ị na-ekiri ihe nkiri, usoro na TV dịka o kwere mee, n'ihi na nke ahụ ga-etinye gị n'okpuru hypnosis. Otú ọ dị, ihe nkiri a bụ banyere edemede site na hypnosis, ma ọ bụ nanị maka protagonist Truman (nke Jim Carrey na-akpọ). The Truman Show nke eziokwu anyị bụ ntakịrị ihe zuru ezu na ọtụtụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ya na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ na-ẹkenịmde ke eziokwu ụgha. Ọ bụ eziokwu nke ọnụ ọgụgụ dị nta nke ọnụ ọgụgụ na-ejikọta ya na ọtụtụ ndị na-abụ ndị nchịkwa Truman Show adịghị eche banyere onwe ha. Nke a bụ n'ihi na clockwork nwere ọtụtụ radars na akụkụ. Ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-etolite radar n'ozuzu, ha onwe ha anaghị ahụ na ha bụ akụkụ nke oge nlekọta ụlọ ọrụ na aghụghọ. Nkume n'elu nke maara ya bụ isi siri ike ma anyị enweghị ike ijide ya maka inwe akọ na uche; ma ọ bụghị na ha agaghị eduzi usoro a.
Ikekwe ị bụ onye na-agụ akwụkwọ ebe a ma ịchọta na ọ bụ ihe efu. Icheghị na ị nọ n'ụdị Truman Gosi. Eleghi anya ị ga-achọpụta 'nhụjuanya' ma na ịchọrọ ịhapụ ndị ọjọọ. Ị ga-ahụkwa ihe ngosi nke dịka nke Marco Borsato na ndị ọrụ ibe ya nwere ike ịbụ naanị ntụrụndụ ọkachamara ma nwee obi ụtọ zuru oke (dabere na ị ga-atọ ụtọ). I nwedịrị ike ịdị na-enwe obi ụtọ maka nnukwu ihe ndị Netherlands na-eme ka ọ kwụsị. Ị nwere ike ịmara na ndị Rom nyekwara ndị mmadụ nri na egwuregwu, ma ị dị mma na nke ahụ; naanị ị na-enweta ya. "Anyị niile dị nnọọ mma!" I chere na ụlọ mkpọrọ ga-agbapụta anyị gburugburu nwere ike ịbụ ihe efu. N'ezie, nke a nwere ike imere ọtụtụ ndị mmadụ. Nke ahụ bụ mmetụta ị na-ahụ na vidiyo dị n'okpuru. Chọọ maka ya. Ọ bụkwa video na-adọrọ mmasị, n'ihi na ndị nọ n'okpuru hypnosis chere na ha na-eri nri mango dị ụtọ. Ya mere, ha adighi-edetụ acid nke lemon nke ha na-ata aru.
Oh, i kwenyeghị na ị na-edebe n'okpuru hypnosis? Na mbụ, Truman aghọtaghị na a na-ejide ya n'eziokwu ụgha ruo mgbe ọ malitere ịhụ ihe ndị dị ebube. Ugbu a ị nwekwara ike ịsị: "achọghị m ịhụ ihe ndị ahụ dị ịrịba ama ma echere m na ọ dị mma otú m si ebi ugbu a." Ọzọkwa, ndị nche nke Trumans Show (ndị na-ewu ọrụ ọrụ radar nile nke na-akwado nke a) nwere (n'ụzọ amamihe dị na ya) na-eme ka ndị mmadụ na-eche echiche dị iche iche na-eme ka 'ndị na-eche echiche ọjọọ', 'ezi', 'nationalistic' 'anti- 'Ijikọ ụwa ọnụ', 'mgbochi ihu igwe,' ndị kwenyere na ụwa dị larịị ', wdg, yabụ na ịchọrọ ịbanye n'òtù ahụ. Wee gụọ ya isiokwu a maka nkọwa zuru ezu banyere otú ha si mee nke a.
Ya mere ọ bụrụ na ị ga-eguzo n'ọnọdụ ahụ nke onye nlekota ọgwụ bụ Rasti Rostelli na m ga-ebili ma tie mkpu na ị na-eri ihe na-egbu egbu egbu mmiri nakwa na a na-emetụta ezé ezé gị; ọ bụrụ na m ga-agwa gị akpụkpọ anụ na mkpụrụ dịka ihe akaebe na ọ bụ lemon, ị ga-echetara m ka m pụọ ma mechie ọnụ m. A sị ka e kwuwe, i ji n'aka na ị na-eri mango dị ụtọ. Ya mere, ịchọrọ ịnụrụ m na ị nọ n'etiti ìgwè ndị nọ n'okpuru hypnosis na gị, onye na-achọghị ịnụ m. Ọ dịghị onye chọrọ ịnụ na ha na-eri nri lemon. Ị na-achị ọchị ọchị ma na-akwa m emo.
Otú ọ dị, ihe akaebe ahụ doro anya, mana ịchọrọ ị gaghị ahụ ya n'ihi na ụbụrụ gị na-agabiga ozi. Otú ọ dị, lemon dị nnọọ uto:
Gọọmentị na-etinye ozi akụkọ dị iche iche, usoro mmepụta ihe na TV, site na usoro miri emi na usoro ngwanrọ arụ ọrụ uche (PsyOps) ka ị nabata iwu na nwa amaala ọbụla nwere ike ịpụ n'okporo ámá n'enweghị enyemaka nke onye ọkachamara ma ọ bụ onyeikpe (lee isiokwu a en nkọwa a na ya). Ala na ndị ọgba aghara!
A na-ewu ụlọ ọrụ 5G nke na-eme ka gọọmenti mee ka ụmụ mmadụ bụrụ akụkụ nke usoro nchịkwa dijitalụ, nke nwere ike ịgbanwe DNA na ntanetị mmadụ wee kwụwa na ntanetị (ịgụ na ịrụ ọrụ ederede). Nke a na-enye ha nchịkwa zuru oke maka ndị mmadụ. A na-akwadebe iwu maka nke a site na arụmụka uche nke akụkọ na-adịghị na ya nke ga-emerịrị ụzọ maka ịnakwere Ntọala data DNA, mkpochapu ahụ mmadụ (iwu inye onyinye). Ejiri ụbụrụ na-ere ndị mmadụ site na n'otu aka ihe egwu nke na-emepụta ọgụgụ isi (AI) ga-abịakwasị anyị ma bụrụ ihe iyi egwu, ka anyị nwee ike ijikọta ya na ya (Elon Musk) na n'aka nke aka site n'inye ọgbọ ọhụụ ohere ịmụta ngwa ngwa, dịka ọmụmaatụ, site na egwuregwu na ụlọ ọrụ porn.
Ndị ọchịchị na-arụ ọrụ na-ejikọ ụwa ọnụ nke na-eji mmegide ma ọ bụ mmebi iwu. Ị ga-eche banyere US megide Russia / China, kamakwa nke ịgba ọchịchị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Nke a bụ ọdịdị aka ekpe aka nri maọbụ usoro ochie nke edoziworo na "mmegharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụrụ." Na isiokwu a Ana m akọwa otú, dịka ọmụmaatụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba na-arụ ọrụ site na mmegide a na-achịkwa.
Ndị ọchịchị na-ebugharị transgender zuru ụwa ọnụ (LGBTI) n'ihi na ha na-achụso ndị bi n'ụwa a transgender-transhuman. A na-eji usoro nwoke na nwanyị na-anọghị na-anọchite anya ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ahụ maka ọdịdị nwoke na nwanyị (na-amalite site n'ụdị ụdị nke a na-akpọ LGBTI); Ndi mmadu a agagh enwe ike muputa n'ime uzo di iche iche nke mere na ichikota ga - edokwa ala. Ụdị nwoke na nwanyi na-anọpụ iche bụ nke okpukpe (Luciferian, egwurugwu). Ọhụrụ ụwa nke Luciferian na-agbasi mbọ ike maka okpukpe 1 ụwa, 1 okike (nwoke na-anọpụ iche na transhuman) na ọchịchị 1 ụwa.
Ndepụta dị n'elu bụ nanị nchịkọta nkenke nke citric acid ị na-eri. E nwere ọtụtụ ihe na-aga n'ihu, ma nke a bụ obere echiche.
M na-agwa gị ka ịpụ na hypnosis gị na ndị na-eguzo gị n'akụkụ Rasti Rostelli. Ndị Marco Borsato nke ụwa a nọ n'ebe ahụ iji mee ka ị dị n'okpuru ọgwụ mgbochi site na ihe ngosi na-egosi na-adọrọ mmasị. Na nzuzo ma ọ bụ n'amaghị ya, ha na-enye aka na nnukwu agbata.
4 June 2019 na 12: 48
M na-ahụ ụdị mkpu enyemaka maka Facebook gị?
Ọhụhụ nke Siebe Viegers egosikwara na ọbụna onye bi n'ógbè ahụ adịghị mgbe ọ hụtụbeghị Siebe dị mita abụọ, nke ahụ agaghị ekwe omume, nke mere na ọnwụ na-esi ísì ụtọ 100% na ifufe ruo ọtụtụ awa.
Nke a nwere ike ịbụ ụdị ọnyà ọzọ, n'ezie n'ezie
Ndị mmadụ na-etinye aka na mgbasa ozi ndị isi na ndị na-arụ ọrụ na ụdị ndị ahụ na-abata n'ime ya pụkwara ịkatọ, a pụrụ ịkpọ ya ọrịa, ndị na-akpachara anya na ndị nwere ike ịgha ụgha nye ndị mmadụ ruo nwa oge ego ma ọ bụ uru ndị ọzọ, echere m na mkpu gị maka enyemaka enyere aka, Maazị Vrijland
Ndị na-arịa ọrịa na-ekere òkè na omume dị otú ahụ bụ ndị na-enweghị ntụpọ ma ghara ịghọta otú ndị ahụ pụrụ isi lee ebe ha na ndị òtù ezinụlọ ha anya. (ka njọ karịa ịkpagbu agwa)
4 June 2019 na 12: 59
"Ee, mana Siebe Viegers achọpụtala na ọ bụghị ndị mmụọ ọjọọ" ndị mmadụ ga-ekwu
Azịza: Mba, nke ahụ bụ ihe mgbasa ozi na-ekwu. Nke ahụ bụ ma eleghị anya ụzọ kachasị mfe iji "mezuo" n'ụzọ zuru ezu "bụ uche nke dabara na nkata ahụ?
Ee, ma eleghị anya, n'ihi na ọ bụrụ na ha gee ntị na ekwentị m (nke m chere na ọ bụ ezi uche), ha maara na m nwere ihe oyiyi (dịka ndekọ nke mkparịta ụka na ụlọ ahịa ebe a hụrụ Siebe).
4 June 2019 na 13: 06
Oh yes ... hụrụ ndị nwụrụ anwụ, ma ọ ga-esi ike ịchọta ihe kpatara ya. Ka ọ bụ na ọ dịghị adị? Ma akụkọ ahụ ọ ga-agbaghara?
3 June 2019 na 22: 34
Fleur bụ naanị onye kwuru okwu 🙁? : gụọ
Akụkọ dị mwute
4 June 2019 na 17: 28
Kedu ka ị ga esi abanye na peeji facebook nke atụrụ a?
Enweghị m ike ịchọta ya, ana m edebi njikọ ahụ ozugbo.
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu niile ọ bụ ịkwa emo.
4 June 2019 na 17: 43
4 June 2019 na 18: 29
Chọta onye a na-ahụ maka ya ??
4 June 2019 na 21: 01
M na-ekwu na ọ bụ ihe pụrụ iche na o doro anya na ha na-ama ụma mee njikọ na Sherlock Holmes na profaịlị facebook, dị ka à ga-asị na ha na-eme ya.
Nke ahụ abụghị n'ezie ịchị ọchị, kama ịkwa ákwá.
Ma echere m na nke ahụ doro anya.
5 June 2019 na 08: 59
Ọ dị mma, na mbido, enwere m mmetụta na ị nọ na-eme ka psyop.
Akpadoro na okwu ndị a na-emelite omume Gladio n'ezie. Ha na-aghọ aghụghọ, dị mma, na-adọrọ adọrọ.
Ọfọn, ụmụ okorobịa si na edemede maara otú e si eme nke ahụ. Ha na-arụ ọrụ mgbe niile n'ịchịkwa ihe niile dịka ọchịchọ ha si dị.
ludcor dere, sị:
4 June 2019 na 22: 06
Enweghị Bakerstreet n'obodo Katwijk (ebe obibi na ebe obibi nke Anja). O doro anya na a psyop.
5 June 2019 na 04: 55
Etughi aha aha Sheep ma. Ọtụtụ atụrụ na-ahapụ onwe ha ka ha bụrụ ndị a na-elekọta ma na-atụ ụjọ site n'aka ndị na-azụ atụrụ (mgbasa ozi) ka o wee yie ka ndị isi obodo anyị pụtara ọ kacha mma maka anyị.
11 June 2019 na 09: 36
Echere na ị dị mma, TV West nwere ike iji Face Morphing mee ihe, nchịkọta miri emi na greenscreen,
Ihe akaebe iji gosipụta ndụ Anja Schaap ka otu nwoke nke ga-ebi n'okpuru ụlọ Anja na Wega 15 na-eme ya ugbu a. na Katwijk, nke e gosipụtara na TV Satellite oge, lee TV West na njikọ
Otú ọ dị, ozugbo anyị na-abanye na ihu nwoke ahụ, anyị ahụrịrịrịrị ihe ụfọdụ dị iche.
N'ihi iwu AVG, ọ gaghị ekwe omume ịdebe foto na saịtị a nke nwere ike igosi ya ihe ndị a gụnyere. Ọ bụ ezie na ha emeela ihe kachasị mma, ha mehiere ihe dị njọ, ma n'ezie, ị ghaghị ịbịakwute ihu, ọ dịghị onye na-ewe oge ahụ ma chee ma ị ga - eme ya
N'okpuru nchọpụta iri: nkeji 01 min-25 sec. 00 ka 01 min-51 sec. 18 enwere karịa ma ndị a kachasị mkpa.
1- Ntị nke nwoke na-ejide onwe ya n'ihu
2- E nwere ike ikwu banyere ọdịdị nke ntị ahụ ma ana-akpọkwa ya aghara aghara
3- Agba nke ntutu, isi site na agba aja aja na agba ntụ na agba Red? (ọ ga-ekwe omume, mana ka?)
4- Nkeji 01-28.2 Nnukwu Blur na akara agba? Nke ahụ bụ n'ihi na nwoke ahụ na-emegharị isi ya n'aka ekpe, ee, nke ahụ ga-ekwe omume, mana onyinyo ahụ dị ọcha na-ahụkwa mgbe isi na-edebe ya.
5- Nnukwu ọnya dị gburugburu gburugburu akwa na akpịrị ma obere jaket na-acha uhie uhie na - egosi
Foto dị nkọ, ị nwere ike ịhụ ákwà ahụ nke ọma.
6- Gaa na 1-37.07 nke abụọ gaa na 1-37.19, Imeghe ọnụ yiri robot
agbada ukwu na-ebugharị, ma ihu nke ọzọ na-anọgide na-adị ike, nke na-adịghị adị.
7- Na nkeji 1-45.17 anya na-emeghe kpamkpam, ya mere ọtụtụ ìhè ga-abata na nku anya, ma mma na peeping ọjọọ bụ ọzọ, ndudue
8-01-46.19T / m 01-47.12 N'ebe a, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, akpa ndị niile na-egosi wrinkles n'akụkụ aka nri ya ma ọ bụghị n'azụ aka ekpe ya, nlele ahụ bụ nke dị nnọọ ukwuu, nke wrinkles
na-ewebiga iwe ókè, nku anya nke a na-apụghị ịhụ maka nke abụọ. E nwere ntakịrị azụ ma pụta na cheeks mana mọzụlụ adịghị ebe ahụ, anya anaghịzi ahụ anya ma ọ bụ ... ma ọ bụ ...
9- Ebe na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke n'elu nkuku ọnụ, ka ha gaa ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ
na-agagharị site n'igosi nkọcha na ịdị omimi nke ọnụ ya, ọ na-ele anya nke ọma.
10- Nkeji 01-38.07 ruo na gụnyere 01-42.22 Na-ele anya na mkpuchi jaket checkered na-aga n'ihu n'olu ọ na-aga n'ihu, sewn hat (hood) na-ebugharị akwụkwọ ma na-anọgide na-agụba ebe niile a ka na-eme ka igwefoto ahụ na-ewe iwe, kama kamera na-adịghị mma.
11 - Naanị onye na-ekiri ihe ọma: ị gaghị ahụ mgbidi aka ekpe na ebe ọ bụla ọzọ na-agagharị na ntụgharị ihu, nke kwesịrị ịbụ n'ihi na igwefoto ahụ na-ewe iwe mgbe niile.
ma hụ nhọrọ ndị ọzọ
12 June 2019 na 13: 06
O doro anya na Iwu Iwu ahụ abụghị maka nwa amaala, nke ahụ nwere ike ịme ugbu a.
Obu ihe di nma ikwu na ndi mgbasa ozi (= ike ngbaghari) nwere ike ibanye na ndi mmadu, ma ndi mmadu enweghi ike iji uzo ha nye madu ibe ha, ndi mmadu nwere ike igosi na. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu na-emebi okwu efu ahụ ma kwuzie na ikwere na anyị na-ebi na mba onye kwuo uche ya n'efu. Site na usoro ha ha na-enye ihe akaebe doro anya na anyị bi na ike, ma anyị apụghị igosi na n'ihi na nke a bụ ntaramahụhụ
13 June 2019 na 15: 55
Ekwenyere m! Lee otua a ga - esi jikọta machibidoro 'ndị ọrụ na - arụ ọrụ' na iwu nzuzo. State na-eji aghụghọ, Machiavellian echiche. Ị na-agba ọsọ dum 180 Celsius
"Inyere sabotage site n'ịgba fim na ịkekọrịta na mgbasa ozi mgbasa ozi: ntaramahụhụ siri ike!
na eserese ị na-emerụ nzuzo nke ndị ahụ metụtara. "Na-ekwusara ihe ndị dị otú ahụ na mgbasa ozi mgbasaozi kwesịrị ịba ụba. Maka ihe banyere iwu nzuzo, ịghara ịkọ ihe vidiyo dị otú a na-eme ndị ezinụlọ na ndị enyi. "
Ụdị dị otú ahụ nwere ike ịga n'ụzọ nke aka ya ma nyere onye aka n'ọdịnihu n'enweghị ihe àmà AV. Onye ohu cq. Ọ dị mkpa ka a na-echekwa ọrịa uche n'oge niile, ịnụ ọkụ n'obi maka ọrụ ọrụ lackey dị otú ahụ na-ebelata na ntụgharị dị elu. Tupu njide UV / robots ejiri na AI rụọ ọrụ, a ghaghị iji oge a mee ihe niile n'ụzọ iwu kwadoro, n'ezie na njedebe nke steeti
" The Thijs H. PsyOp ghaghị imebi nzuzo nzuzo na nke emeelarịrị taa
Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp ugbu a na-ejikwa ndị ọka iwu rịọ ndị ọkà okwu? »
Nleta nile: 15.835.819